कमजोर तयारीमा पनि जितको अपेक्षा । - Malayakhabar
होम पेज खेल कमजोर तयारीमा पनि जितको अपेक्षा ।
कमजोर तयारीमा पनि जितको अपेक्षा ।
काठमाडौं:= गत चैतमा कोरोना संत्रमण रोकथामका लागि लकडाउन घोषणा भएपछि नेपाली फुटबल टोलीको प्रशिक्षण पनि रोकियो । त्यसयता झण्डै आठ महिना नेपाली टोलीका सदस्यहरू घरमै बसे । फुटबल उनीहरूका लागि बिरानो बन्यो ।
अघिल्लो सातादेखि नेपाली टोली पुनः मैदानमा उत्रिएको छ । कारण, नेपालले बंगलादेशसँग आगामी हप्ता दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ । त्यसका लागि एकहप्ता घरेलु मैदानमा प्रशिक्षण सकेर नेपाली टोली बिहीबार बंगलादेश प्रस्थान गरेको छ । जहाँ एकहप्ताको प्रशिक्षण पनि नेपालले कात्तिक २८ र मंसिर २ मा दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ ।
नेपाली टोलीका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेञ्जोङले स्पष्ट रूपमा तयारी कमजोर रहेको बताउनुभएको छ । तर, कमजोर तयारीका बाबजुद जितका लागि मैदान उत्रिने उहाँले बताउनुभयो । ‘मैदानमा गएपछि कोहीपनि हार्न चाहँदैन । आठ महिनापछि मैदानमा फर्किएका हामी एक हप्ताको तयारीपछि खेल्न जाँदैछौं । यो पर्याप्त समय हैन । तर चुनौतीका बाबजुद हामी एकजुट भएर जितका लागि खेल्नेछौं,’ कप्तान किरणले भन्नुभयो ।
नेपाली टोलीको अर्को मुख्य समस्या भनेका मुख्य खेलाडीसहित सातजनालाई कोरोना संक्रमण हुनु हो । एन्फाले नाम नखुलाएपछि टोलीका केही महŒवपूर्ण सदस्यहरू कोरोना पोजिटिभ देखिएका कारण नेपालमै रोकिएका छन । अर्कातिर चोटका लागि अनुभवी मिडफिल्डर रोहित चन्द पनि टोलीसँग नजाने भएका छन् ।
सोहीकारण आठजना नयाँ खेलाडीले टोलीमा मौका पाएका छन् । बंगलादेशविरुद्ध उत्रने नेपाली टोली नयाँ र कम अनुभवी हुनेछ । कप्तान किरणले पनि नयाँ खेलाडीको प्रदर्शन हेर्न आफू उत्साहित रहेको र उनीहरूले परेको बेला टोलीलाई योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘टोलीमा नयाँ खेलाडी आएका छन् । जुन राम्रो हो । उनीहरूलाई लामो समय प्रशिक्षण र एक्सोजर आवश्यक हुन्छ । यो दुई खेलले उनीहरूलाई पनि एक्सोजर मिल्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छु । साथै उनीहरूको प्रदर्शन र पोटेन्सियल पनि हामीले हेर्ने मौका पाउनेछौं,’ किरणले भन्नुभयो ।
२५ सदस्यीय नेपाली टोलीमा अजित भण्डारी, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, एरिक विष्ट, भरत खवास, विकास खवास, विक्रम लामा, विमल राना, विशाल श्रेष्ठ, दर्शन गुरुङ, दीप कार्की, दिलेन लोक्तान, जर्ज प्रिन्स कार्की, किरण चेम्जोङ, नवयुग श्रेष्ठ, पुजन उपरकोटी, रञ्जित धिमाल, रवि पासवास, सरोज दाहाल, सेशेहाङ आङदम्बे, सुवास गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, तेज तामाङ र छिरिङ गुरुङ हुनुहुन्छ ।
नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा बालगोपाल महर्जन र सहायक प्रशिक्षकका रूपमा किरण श्रेष्ठ तथा गोलकिपर प्रशिक्षकका रूपमा विकास मल्ल रहनुभएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल, एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालगायतले बुधबार खेलाडीहरूको बिदाइ गर्नुभएको थियो । २०७५मा भएको सात च्याम्पियन्ससिप पछि नेपालले पहिलोपल्ट बंगलादेशविरुद्ध खेल्न लागेको हो । त्यसबेला नेपालले नेपालले बंगलादेशलाई २–० गोलअन्तरले हराएको थियो ।
[ पर्याप्त तयारी पुगेन : कप्तान किरण चेञ्जोङ ]
लामो समयपछि मैदानमा फर्कँदा टोलीको उत्साह कस्तो छ ?
सात÷आठ महिनाको लामो समयपछि हामीले फेरि फुटबल खेल्न पाइरहेका छौं । यो राम्रो भएको छ । हामी उत्साहित छौं । लामो समयपछि टोलीका सदस्यहरूलाई मैदानमा देख्न पायौं । एकजुट भएर खेल्न पायौं । कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै हामीले प्रशिक्षणअगाडि बढाएका थियौं ।
बंगलादेशविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालमै तयारी कस्तो भयो ?
तयारी समग्रमा राम्रै भयो । तर सँगसँगै यो हामीलाई चुनौतीपूर्ण छ । हामीले पर्याप्त समय पाएका छैनौं । किनकी हामीले एकहप्ता यहाँ प्रशिक्षण गरेर बंगलादेश जाँदैछौं । बंगलादेशमा हुने अर्कोहप्ताको प्रशिक्षणले हामीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ । कम्तीमा एक वा दुई महिना तयारी भएको भए त्यसले हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर महामारीका बेला यति समयको तयारीका बाबजुद हामी चुनौती उठाउन तयार छौं ।
बंगलादेशविरुद्ध हामीले कस्तो नतिजाको अपेक्षा राखेका छौं ?
अवश्य पनि मैदानमा गएपछि कोही हार्न चाहँदैन । तर खेलमा जित हार त भइहाल्छ । तर सात÷आठ महिनापछि मैदानमा फर्किएर केही दिनको मात्रै प्रशिक्षणमा हामी खेल्न जाँदैछौं । त्यसले चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ । हामी एकजुट भएर जितका लागि खेल्नेछौं । रिजल्ट जे भए पनि राम्रो फुटबल पस्कनेछौं ।
टोलीमा धेरै नयाँ खेलाडीहरू हुनुहुन्छ । उहाँबाट अपेक्षा कस्तो छ ?
हो, नयाँ खेलाडी आएका छन् । जुन राम्रो हो । थोरै समय भएकाले मैले सबैलाई हेर्न पाएको छैन । तर उनीहरूलाई मैदानमा खेलेको हेर्न म उत्साहित छु । उनीहरूलाई लामो समय प्रशिक्षण र एक्सोजर आवश्यक हुन्छ । यो दुई खेलले उहाँहरूलाई पनि एक्सोजर मिल्नेछ र हामीले पनि सक्दो हौसला दिनेछौं । हामीले पनि नयाँ खेलाडीहरूको प्रदर्शन र पोटेन्सियल हेर्ने मौका पाउनेछौं । नयाँ खेलाडीहरूले टोलीका लागि एकदमै मिहिनेत गर्दै देशका लागि योगदान दिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
अघिल्लो लेख जुन कम्पनीले नियमित रुपमा नेपाली श्रमिकलाई पुरस्कार दिइरहन्छ।
पछिल्लो लेख यस बर्ष तिहारको गीतमा विवाद छल्ने कोसिसमा गायक दुर्गेश थापा।
नेपाल सितोरियो कराते सतुङ्गल डोजोद्वारा खेलाडी तथा प्रशीक्षक सम्मानित।
नेपाली क्रिकेटका ‘ग्लोबल आइकन’ सन्दीपले होबर्ट हुरिकेन्सबाट बिग ब्यास लिग खेल्ने।
‘हिजाे खाते भनेर अपमान गर्नेहरू आज स्याबास भन्दै धाप मार्छन्’